လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုထဲက ဇာတ်ပို့မင်းသားဟာ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ချလိုက်တဲ့ ဂျွန်လွင် – Cele Snap
Stars & Models Int’l Yangon ရဲ့ ဦးစီးတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ ဂျွန်လွင်ဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့သလို အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီး ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် တစ်ယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာလည်း မော်ဒယ်လ်တွေများစွာကို မွေးထုတ်ပေးနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောပွင့်လင်းပြီး မှန်ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတတ်တဲ့ ဂျွန်လွင်ဟာ ဒီကနေ့မှာလည်း လိင်တူချစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်က “လွန်ခဲ့တဲ့2လ က ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ က ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် ထဲ မှာ တွန်း နိုး တယောက်ရှိတယ် သိကြလားဟင်? မေးစေ့ကလဲ filler ထိုးထားတယ် ယီးစားက ဟန် ပြ လဲရှိတယ်( မသိပဲအရှခံတဲ့မိန်းမကြီးလဲ သနားစရာ) ဘောလုံးလဲကန်တယ်။ တခုရှိသေးတယ်။ ဒီတွန်းနိုးက လဲ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကနံမည် ကြီး presenter နဲ့ လဲ အကြီးအကျယ် ပေါ့။ တွန်းနိုး = ………,သိရင် comment မှာရေးခဲ့ကြပါ။ မှတ်ချက် လူလောကမှာ ကိုယ်ဘာလဲသိရဲ့နဲ့ ဖုန်းကွယ်ထားတဲ့သူတွေကို အရမ်းမုန်းလို့ပါ။ လူတိုင်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် သိုသော် သူတပါးကို လိမ်လည် လှည့်ဖျားခွင့်မရှိ။ ငါတိုကြတော့ အရှိ အရှိတိုင်းနေတော့ ငါတို့က သူတော်ကောင်း မဟုတ် မသိရင် သူက သူတော်ကောင်း ” ဆိုပြီး ဖော်ထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်ကတော့ ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာကို သိရဲ့နဲ့ သူတစ်ပါးကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့သူတွေကို အရမ်းမုန်းတာကြောင့် နာမည်ကြီးဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်မင်းသားရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကို ဖော်ထုတ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဂျွန်လွင်ပြောတာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေေ လာက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။
Source: John Lwinး’s fb
Stars & Models Int’l Yangon ရဲ့ ဦးစီးတညျထောငျသူဖွဈတဲ့ ဂြှနျလှငျဟာ သူကိုယျတိုငျလညျး မျောဒယျလျတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလမျးခရီးကို လြှောကျလှမျးခဲ့သလို အသကျအရှယျတဈခုရောကျရှိလာပွီး ဝါရငျ့သမ်ဘာရငျ့ တဈယောကျဖွဈလာခြိနျမှာလညျး မျောဒယျလျတှမြေားစှာကို မှေးထုတျပေးနသေူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ စကားပွောပှငျ့လငျးပွီး မှနျရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပွောဆိုတတျတဲ့ ဂြှနျလှငျဟာ ဒီကနမှေ့ာလညျး လိငျတူခဈြတဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျရဲ့အကွောငျးကို ဖျောထုတျလာခဲ့ပါတယျ။
ဂြှနျလှငျက “လှနျခဲ့တဲ့2လ က ပွတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲ က ဇာတျပို့ သရုပျဆောငျ ထဲ မှာ တှနျး နိုး တယောကျရှိတယျ သိကွလားဟငျ? မေးစကေ့လဲ filler ထိုးထားတယျ ယီးစားက ဟနျ ပွ လဲရှိတယျ( မသိပဲအရှခံတဲ့မိနျးမကွီးလဲ သနားစရာ) ဘောလုံးလဲကနျတယျ။ တခုရှိသေးတယျ။ ဒီတှနျးနိုးက လဲ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကနံမညျ ကွီး presenter နဲ့ လဲ အကွီးအကယျြ ပေါ့။ တှနျးနိုး = ………,သိရငျ comment မှာရေးခဲ့ကွပါ။ မှတျခကျြ လူလောကမှာ ကိုယျဘာလဲသိရဲ့နဲ့ ဖုနျးကှယျထားတဲ့သူတှကေို အရမျးမုနျးလို့ပါ။ လူတိုငျးလှတျလပျပိုငျခှငျ့ ရှိတယျ သိုသျော သူတပါးကို လိမျလညျ လှညျ့ဖြားခှငျ့မရှိ။ ငါတိုကွတော့ အရှိ အရှိတိုငျးနတေော့ ငါတို့က သူတျောကောငျး မဟုတျ မသိရငျ သူက သူတျောကောငျး ” ဆိုပွီး ဖျောထုတျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂြှနျလှငျကတော့ ကိုယျဘာလဲဆိုတာကို သိရဲ့နဲ့ သူတဈပါးကို ဖုံးကှယျထားတဲ့သူတှကေို အရမျးမုနျးတာကွောငျ့ နာမညျကွီးဇာတျပို့သရုပျဆောငျမငျးသားရဲ့ ဖွဈတညျမှုအမှနျကို ဖျောထုတျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ဂြှနျလှငျပွောတာ ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာ စဉျးစားနေေ လာကျပွီထငျပါတယျနျော။